Pep Guardiola oo dharbaaxa xoogan la damacsan kooxdiisa hore ee Barcelona – Gool FM
(Manchester) 09 Sept 2018. Wargeyska Don Balón ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola uu dharbaaxo xoogan la damacsan yahay kooxdiisa hore ee Barcelona.
Pep Guardiola ayaa si weyn u xiiseenaya inuu lasoo saxiixdo da’ayarka kooxda Paris Saint-Germain Adrien Rabiot, kaasoo ay sidoo kale Barcelona br-tilmaameed xoogan ka dhiganeyso saxiixiisa.
Macalinkii hore kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ayaa ka war qaba in heshiiska Adrien Rabiot ee Paris Saint-Germain uu soo idlaanayo xili ciyaareedka soo aadan, sidaas darteed wuuu doonayaa in saxiixiisa uu kaga hormaro naadiga Blaugrana.
Si kastaba maamulka kooxda Manchester City ayaa waxay go’aansadeen in Paris Saint-Germain ay miiska u saaraan aduun dhan 30 million euros si ay kaga soo qaataan saxiixa Adrien Rabiot, hadii uu ogolaado inuu u dhaqaaqo Etihad Stadium, isla markaana uu iska diido dhamaan dalabyada kale.
Warar badan ee soo baxayay dhawaan ayaa sheegay in Barcelona inay dooneyso xidiga reer France ee Paris Saint-Germain Adrien Rabiot, si ay ugu xoojistaan khadka dhexe ka dib bixitaanka Andres Iniesta.